Fall River Mills, California, i-United States
Indawo esepulazini ibungazwe ngu-Natalie
Ikotishi elinokuthula elinokuthula elinokudoba nokufinyelela e-Fall and Tule Rivers, ukuqaliswa kufakiwe. Epulazini lomndeni elizimele elingamahektare angama-375. Sifuye izinkomo, izingulube, amadada nezinkukhu. Iqhwa lasebusika, izingane zezilwane zaseNtwasahlobo kuzo zonke izindawo ozibhekayo, ukubhukuda ehlobo, ukudoba, umgodi wokucisha izikebhe, ukubuka izinkanyezi, I-Fall Harvest, izithelo ezintsha nemifino ukuze wabelane ngazo, sicubungula izingadi zethu ngokufaka amathini, ukulondoloza, nokupheka umpheki wokupheka. Uma ungumuntu othanda ukudla noma unesifiso sokuhlala ekhaya lena yindawo yakho. Ukubuka izinyoni A+
I-Cottage ivumela izilwane ezifuywayo. Sinenkokhelo yesilwane esifuywayo sasebusuku engu-$10 okudingeka ikhokhwe lapho sifika noma ngaphambi kokufika nge-Airbnb.
Sinenye yezindawo ezinhle kakhulu zokudoba emfuleni. Isikhathi esihle sokuphuma nge-kayak yethu noma isikebhe ukuthatha izithombe zezilwane zasendle noma ukuhlola nje. Ungakwazi ukugwedla uye emachibini amathathu kanye nepaki yombuso ukusuka endaweni yethu. Sinezinkozi noklebe abazingela eduze komfula. Kuhle ngempela
Ikotishi linamamitha amabili. Eyodwa ebheke eNtabeni iLassen enetafula lepikiniki. Enye ibheke entabeni iShasta nomfula. Ikotishi linendawo yalo yokupaka ngasensimini yezithelo. Siqasha isikebhe somuntu ongu-1, 2 kanye ne-kayak yomuntu ongu-2, 1. Umfula uyamangalisa, ulungele ukudoba, ukubhukuda noma ukubuka imvelo. Uzobona ama-otters, ama-bald eagle, ama-golden eagle, amahansi, izinyamazane, ama-muskrat, ama-cranes, amadada, izimfudu, izinhlanzi, izinhlobo zezinyoni ezingaphezu kwalokho engingazibala nokunye okuningi. Kuyamangaza kulo nyaka! Woza uzozibonela ipulazi lethu ukuze uthole indlela yokuphila etafuleni futhi uphumule ebuhleni bemvelo.
4.77 ·424 okushiwo abanye
4.77 · 424 okushiwo abanye
Sinendawo enhle yabantu abafuna ukuhlola i-Lassen noma i-Mt Shasta. Sinemihume yodaka kanye nezimpophoma ezi-5 endaweni yethu. I-Burney Falls idume kakhulu. Uma ungumnikazi wesikebhe sinokwethulwa futhi usuka e-Ranch ungakwazi ukufinyelela e-Big Lake, e-Eastman Lake, e-Tulie River, nase-The Fall River. Sine-Kayaks esiqashiswayo ukuze sihlole noma sidobe kuyo.
Ngihlala eduze kwekotishi futhi ngizobe ngilapha ukuzongena. Ngikhona futhi ngezidingo zezivakashi.
Hlola ezinye izinketho ezise- Fall River Mills namaphethelo